Duqeyn Ka dhacday Gobolka Jubada Dhexe oo khasaare sababtay – SBC
Duqeyn Ka dhacday Gobolka Jubada Dhexe oo khasaare sababtay
Wararka ka imaanaya degmada jilib ee gobolka jubada Dhaxe ayaa ku warayama in diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Kenyaay duqeyn xoog leh ka geystay Deegaanada Gobolkaas ka tirsan.
Duqeynta ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay 6 qof oo laba ka mid ah ay yihiin caruur waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo kale sida aysheegeen goobjoogayaal ka gaabsaday in magacooda saxaafada laga sheego.
Diyaaradaha Dagaal ee duqeeyay Degmada Jilib ayaa waxaa ay madaafiic culus ku garaaceen degmadaas iyaga oo khasaare xoog leh garsiyay dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Weerarka Kenya ee Arxan darada ah waxaa uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan Ciidan iyo saraakiil laga soo qafaashay lagu soo bandhigay deegaano ka tirsan Koonfurta Dalka Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan Xarakada Alshabaab.
Dadka Deegaanka oo ka warbixiyay sida wax u dhaceen waxay ayaa sheegay in diyaarado dagaal oo ka yimid dhinaca Kenya inay ka yimaadeen dhinaca wadanka Kenya islamarkaasina Duqeynta iyo guuxooda uu is la socday
Majirto wax war rasmi ah oo ka soo baxay Dowlada Kenya oo ku aadan inay duqeyntaas geysteen oo ay laayeen dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur aad u da’ayar.